Ukuba ucinga ukuthengisa ipropathi yakho ekuhlalwa kuyo ngabaqeshi, ufuna ukulungiswa, ke ukuthengisa kuya kuhamba ngokuncomekayo. Umqashi kwipropathi obeka kuyo kwintengiso unokwenza kube lula ukuba bayazi ukuba zithini na izicwangciso zakho, ezinokuthi zenzeke, kwaye ukuba banenkuthazo yokunceda kwinkqubo. Ufuna ukuba babe kwicala lakho, kwaye awufuni ukuba banomsindo. Uninzi lwabaqeshi lunengqiqo kwaye luya kuyiqonda le meko, kodwa gcina ucinga ngakwicala labo le meko kunye nokuphazamiseka okuya kubazisela ebomini babo.
Uya kuba ucela umqeshi ukuba alungele ukuhamba ukuba umthengi akacwangcisanga ukuthenga ipropathi ngeenjongo zotyalo mali. Ipropathi kufuneka ibekwimeko yokubonisa, ukuze ihlale icocekile kwaye icocekile mhlawumbi ingaphezu koko kuqashiwe ngumqashi. Ukuphazamiseka emsebenzini wabo, esikolweni, nakwiishedyuli zemisebenzi yobomi. Umqeshi unabantu abangaziwayo abahamba phakathi kwekhaya kunye nokubona izinto zabo banokuziva njengokuhlaselwa. Umqeshi uqeshiwe elinde umntu ukuba ajonge ipropathi, kwaye ayenzeki, ngakumbi emva kokuba betshintshe ishedyuli yabo ukuze babe lapho.
uqhagamshelwano -Nxibelelwano oluvulekileyo phakathi kwakho nomqeshi yinto ephambili kwimpumelelo yakho. Ukuhlala phantsi ucacisele ukuba kutheni ufuna ukuthengisa umhlaba nento oyilindeleyo kubo kuya kunceda inkxaso yabo.
Ukuthengisa kwabaqeshi - Nikeza umqeshi ukuba athenge ipropathi. Ngamanye amaxesha umqeshi uye angaqwalaseli ukuthenga indlu okanye angazi bafaneleke ukuba ngumnini mzi.
Zi khuthazo -Uqwalasele ukubonelela ngenkuthazo yokukhuthaza umqeshi ukuba akuncede kuba oku kuya kuxhamlisa umthengisi. Ezinye zezinto ezinokukhuthaza ukucinga ngazo zezi:
Ukunciphisa irente ngelixa ipropathi isemarikeni
ukuhlawulela inkonzo yokucoca
Ukuhlawula umqeshi umrhumo ngalo lonke ixesha indlu ibonakalisa
bahlawula iindleko zabo zokuhamba
isatifikethi sesipho okanye ibhonasi eyongezwe kwidipozithi yabo yokhuseleko emva kwentengiso
Lindele -Yubonakale ekuhleni into enokuthengiswa ngumthengisi wepropathi. Umzekelo, ukuba bafuna ukuhamba, babazise ukuba lingakanani ixesha abaza kuba nalo emva kwentengiso yokuhamba. Cacisa ngokucacileyo ulindelo lwakho malunga nendlela ofuna ukuba bancede ngayo ekuthengiseni impahla, njengokuyigcina icocekile kwaye ibonakalayo ngaphakathi nangaphandle.
I-Realtor -Ukuba ucwangcisa ukusebenzisa iarhente yesakhiwo, sebenzisana nearhente yokuqinisekisa ukuba bayanxibelelana ngokubonisa amaxesha kunye nomqeshi kwimeko yokuba kufuneka betshintshe ishedyuli yabo. Umthengisi kufuneka abe ngaphezulu kwemiboniso kwaye avumele umqashi ukuba abonise imirhoxiso ngokukhawuleza.
Awufuni ukucaphukisa umqeshi ukuba kunokwenzeka. Umqashi onomsindo unokonakalisa ipropathi, athintele iifowuni zomntu othengisa izindlu ukuze asete ixesha lokubonisa amaxesha, ashiye impahla yakhe ngokungcolisekileyo, okanye asebenze ukonakalisa intengiso ngeendlela ezahlukeneyo. Ufuna ukunqanda iindleko kunye nokungxama kokugxothwa okungcolisayo, ngoko ke mema umqeshi ukuba abe kwicala lakho kwaye ancede ngokuthengisa ipropathi yakho.
UJodi Bakst, oQinisekisiweyo Ingcali yokuthengisa intengiso yasekhaya kunye noMnini weBroker kuMnini ziingcali zeearhente ezisekwe kwiChapel Hill, eNyakatho ye-Karolina, akapheleli nje kwibhokisi yokucinga, uqeqeshelwe ukubonisa nokuthengisa izindlu eziphezulu
Olu ngeno yafakwa kwi Ukuthengisa izindlu nomhlaba noqhotyosho Intengiso yePropathi, Ukuthengisa ngepropathi, Intengiso yeNtengiso yePropathi, ukuthengisa izindlu nomhlaba, thengisa impahla, ukuthengisa iipropathi, Ukuthengisa izindlu nomhlaba, ukuthengisa iipropathi yokuhlala. Bookmark le Permalink.